မယ့်ကိုး: စာဖတ်သူကို နားလည်ခြင်း
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 6/03/2013 07:04:00 PM
မယ့် အယူအဆကို မိုးနတ်နားလည်မိပါရဲ့ :)
Very good essay & book review. Thanks.
4/6/13 12:25 AM
‘အပြစ်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကို လက်ညှိုးထိုးခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အရှက်တရားက လွတ်မြောက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။’
အဲဒီ့စကားလေးက အများကြီး တာသွားတယ်. တွေးလေလေ အဓိပ္ပါယ်ပိုပေါ်လေလေပါပဲ.
4/6/13 3:05 AM
မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက်ကြတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်လွတ်ရုန်းပြီး ထွက်မပြေးချင်ပါ။ပြဿနာပြုသူများကို လက်ညှိုးထိုးခြင်းဖြင့်လည်း ကိုယ်တစ်ယောက်သာ အပြစ်ကင်းသူအဖြစ် ဝံ့ကြွားလက်မထောင်မှာ မဟုတ်ပါ။ ‘အပြစ်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကို လက်ညှိုးထိုးခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အရှက်တရားက လွတ်မြောက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။’
ဆင်ခြင်ဖွယ်ရာ စာစုတစ်စုပါပဲ ..
Really appreciated. Can't express by words how nice your post is. =)
မယ့် ငြိမ်းချမ်းလှပခြင်းတွေ လှိုင်လှိုင်ပွင့်ဖို့ ဆုတောင်းချင်တာ မယ့် မမိုက်မဲပါဘူး။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံလေးလဲ အဓိကရုဏ်းဒဏ်တွေကြောင့် စိုးထိတ်စရာပါပဲ။ ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်နွှယ်နေတာ ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ ငြိမ်းချမ်းဖို့ ဆုတောင်းပေးရုံကလွဲရင် ကျနော်တို့လဲ ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး မမရယ်
အပြစ်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းကို လက်ညှိုးထိုးခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ကို အရှက်တရားက လွတ်မြောက်စေမှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကူးယဉ်သူ ကျွန်မကတော့ လူရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဟာ ထိုမျှမဆိုးယုတ်ဘူးဆိုကာ တရားမျှတမှု၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကို ယုံကြည်မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ^^
11/6/13 11:48 AM
ွှ့Thank you very much for this post and I do appreciate your each word in this post. I feel heartily for them.
22/6/13 12:07 PM